कोरोना कहर घटेपछि खप्तडमा पर्यटकको चहलपहल - नेपालबहस
कोरोना कहर घटेपछि खप्तडमा पर्यटकको चहलपहल
| १६:५५:३० मा प्रकाशित
१० फागुन,डोटी । कोरोना भाइरसको जोखिम घट्दै गएसँगै सुदूरपश्चिमको प्रमुख पर्यटकीयस्थल खप्तड घुम्न आउने पर्यटकको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ । आन्तरिक तथा छिमेकी मुलुक भारतबाटसमेत पर्यटक आउन थालेपछि पछिल्लो समय खप्तडमा चहलपहल पनि बढ्दै गएको स्थानीय पर्यटन व्यवसायी बताउँछन् । सुन्दर खप्तड क्षेत्रको अवलोकन गर्न हिजोआज दैनिक सयौँको सङ्ख्यामा पर्यटक यहाँ आउने गरेका खप्तड पर्यटन विकास समिति डोटीले जनाएको छ ।
विकास समितिका अनुसार यो वर्षको अहिलेसम्म भारतीयसहित ३९ जना मात्र विदेशी पर्यटकले खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज अवलोकन गरेको तर तीन हजारभन्दा बढी स्वदेशी पर्यटक यहाँ पुगेका छन् । खप्तडमा पर्यटकहरु दिनहुँ आउन थालेपछि यहाँका होटेल व्यवसायी तथा सवारी साधन आम्दानीमा पनि बृद्धि भएको शैलेश्वरी यातायात प्रालिका कार्यालय प्रमुख प्रेमबहादुर रावलले बताएका छन् । उनले भने, “पछिल्लो समय खप्तडमा पर्यटक आउन थालेका छन्, उनीहरुले गाडी रिजर्भ गर्ने भएका कारण पनि स्थानीय यातायात व्यवसायीको आम्दानी पनि बढ्न थालेको छ ।”
पछिल्लो केही दिनमात्र यहाँका घरबास तथा स–साना होटेल पनि आन्तरिक तथा भारतीय पर्यटकका कारण भरीभराउ हुन थालेका छन् । जिल्लामा पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको जोखिम घट्दै गएका कारण खप्तड घुम्न आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा उल्लेख्य बृद्धि भइरहेको खप्तड पर्यटक विकास समितिका अध्यक्ष हर्कबहादुर सिंहले बताए । उनले भने, “कोरोनाका कारण खासै पर्यटक आएका थिएनन, अहिले जोखिम कम भएपछि पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दै गएको पाइएको छ ।”
यतिमात्र नभई खप्तडमा पर्यटकको सेवा सुबिधाका लागि घरबास तथा हेलिकप्टर टुरको व्यवस्था गरिएपछि पर्यटक आउने क्रम बढेको डोटीका स्थानीय तथा त्रिबेणी एफएमका स्टेसन म्यानेजर कर्ण चन्दले जानकारी दिएका छन् । निकुञ्जमा बाह्य पर्यटकभन्दा बाजुरा, अछाम, डोटी र बझाङका पर्यटक अवलोकन तथा भ्रमणमा बढी आउने गरेको खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालयले जनाएको छ । निकुञ्ज भ्रमण गर्न आउने पर्यटकबाट चालू आर्थिक वर्षको माघ सम्ममा कम्तिमा रु तीन लाखभन्दा बढी राजश्व सङ्कलन भएको जनाइएको छ । निकुञ्जमा आन्तरिक पर्यटकलाई निःशुल्क र बाह्य पर्यटकलाई प्रतिव्यक्ति रु तीन हजार ३९० दरले भ्रमण शुल्क तोकिएको छ । निकुञ्ज क्षेत्रभित्र धार्मिक तथा ऐतिहासिक पर्यटकीय क्षेत्रका साथै जङ्गली जनावरसमेत हेर्न सकिन्छ । त्यहाँ रहेका त्रिवेणीधाम, नागढुङ्गा, खप्तड स्वामीको आश्रम, २२ पाटनलगायत क्षेत्रको भ्रमण गरी मनोरञ्जन लिन सकिन्छ ।
खप्तड क्षेत्रमा जेठ महिनामा गङ्गा दशहरा मेला र जनै पूर्णिमाका दिन भव्य जात्रा लाग्ने गर्दछ । खप्तड क्षेत्रमा आउने पर्यटकको सुविधा र सहजताका लागि डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिका तथा खप्तड पर्यटन विकास समितिको पहलमा झिग्रानासम्म सडक सुविधा पु¥याइएको छ भने प्रदेश सरकारको लगानीमा यो वर्ष झिग्रनासम्म उक्त सडक कालोपत्र हुँदै छ । झिग्रानाबाट भने पर्यटकको मागअनुसार घोडा चढ्ने व्यवस्था मिलाइएको पूर्वीचौकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीर्घराज बोगटीले बताएका छन् ।
होटल व्यवसायी सङ्घ डोटीका अध्यक्ष दीपकबहादुर खड्काका अनुसार बग्लेकमा तत्कालै ठूला होटलहरु सञ्चालनमा ल्याउन कठिन भएकाले होमस्टेका माध्यमबाट पर्यटकलाई सुविधा दिन घरहरु छनोट गरिएको हो । खप्तड क्षेत्र खप्तड बाबाले तपस्या गरेको पवित्र ठाउँ पनि हो । खप्तड बाबाले खप्तडमा ५० वर्ष बिताएको मानिन्छ । खप्तड बाबा आश्रममा बाबाको मूर्तिका साथै उनले प्रयोग गरेका केही सामान छन् । यस ठाउँमा बसेर बाबाले योग र ध्यान गर्नुका साथै कृतिहरु पनि रचना गरेका थिए । उनका धर्म विज्ञान, विचार विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, म र मेरो कर्तव्य, नारी धर्म र पुरुष धर्म, आत्मज्ञान, योग विज्ञान, वेदान्त विज्ञान, आरोग्य विज्ञानलगायतका कृति प्रकाशित छन् ।
खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार पहाडी जिल्ला बझाङ, बाजुरा, अछाम तथा डोटीको सङ्गमस्थलमा अवस्थित छ । यसको क्षेत्रफल २२५ वर्ग किलोमिटर छ । समुद्र सतहदेखि तीन हजार ५०० मिटरसम्मको उचाइमा रहेको यो निकुञ्जभित्र ५६७ थरीका वनस्पति र नेपालमा पाइने ८५० किसिमका चराचुरुङ्गीमध्ये २६० भन्दा बढी चराचुरुङ्गी पाइने गरेको निकुञ्जका पूर्वसहायक संरक्षण अधिकृत प्रकाशबहादुर शाहले बताएका छन् ।
मंसिरदेखि फागुन महिनासम्म यो ठाउँ हिउँले ढकमक्क हुने गदर्छ । खप्तड पुग्ने धेरै बाटो भए पनि डोटीको बग्लेक हुँदै जाने बाटो बढी प्रचलनमा छ ।
सौर्य प्लान्टबाट १० मेगावाट विद्युत् केन्द्रीय प्रसारणमा जोडियो १८ घण्टा पहिले
म्याद सकिएको सामग्री बिक्री आरोपमा व्यापारीलाई जरिवाना ६ दिन पहिले
कामना सेवा बैंकको ऋणपत्र बाँडफाँड ६ दिन पहिले
महिलाको स्वास्थ्य ध्यानमा राख्दै सुधारिएको चुलो वितरण १ हप्ता पहिले
गोलभेँडा खेतीप्रति उत्साहित किसान उचित मूल्य नपाउँदा निराश ३ हप्ता पहिले
फोनलोन सेवाः सय दिनमा हजार बढिले लिए ऋण १ हप्ता पहिले
चलचित्र गोर्खे फागुन २१ मा प्रदर्शनमा आउने, पोस्टर सार्वजनिक ४ हप्ता पहिले
बजेटबारे के भन्छन्:- पूर्व गभर्नर, बैंकर तथा व्यवसायी ? ९ महिना पहिले
बाइडेनको कार्यकालमा नेपाल र अमेरिका बीचको दौत्य सम्बन्ध थप उचाई पुग्ने राणाकाे विश्वास ४ महिना पहिले
एसपी मल्ललाई १२ घण्टे पुर्जी ! १ वर्ष पहिले